पैसा लिएर घर नबनाउने भूकम्पपीडितको तथ्यांक संकलन हुँदै,७० प्रतिशतले पाए तेस्रो किस्ता - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
पैसा लिएर घर नबनाउने भूकम्पपीडितको तथ्यांक संकलन हुँदै,७० प्रतिशतले पाए तेस्रो किस्ता
पाल्पा । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान बुझी आवास निर्माण हुन नसकेको परिवारको खोजी हुने बताएका छन्।
ज्ञवालीले सरकारी अनुदान बुझेर घर पुनःनिर्माण हुन नसकेकाहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम हुने बताए।
कुन घर किन बनेन भन्नेबारे प्राधिकरणले सबै तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्न थालेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए। प्राधिकरणले देशभर ७० प्रतिशत भूकम्पपीडित निजी आवास बनाउन तेस्रो किस्ता प्रदान गरिएको बताए।
उनका अनुसार ६२ प्रतिशत भूकम्पपीडित नयाँ निजी आवासमा बसोबास गर्न थालेका छन्।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ पाल्पा शाखाद्वारा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले ५२ प्रतिशत भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्ता रकम भुक्तानी भइसकेको बताए। उनले भूकम्पबाट क्षति भएका स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरुको पुनःनिर्माणको काम तीव्ररुपमा भइरहेको जानकारी दिए। छोटो समयमा पनि प्राधिकरणको प्रगति राम्रो रहेको ज्ञवालीको भनाइ थियो।
पाल्पामा भूकम्पबाट क्षति भएका ११४ विद्यालयका ३४८ कोठा निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको उनले बताए। प्राधिकरणका प्राविधिक भूकम्पपीडितका घरमा पुग्नुभन्दा अघि निर्माण भएका संरचनालाई प्राधिकरणले एकमुष्ट तेस्रो किस्तासम्मको रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ। प्राधिकरणले भूकम्पपीडितलाई वित्तीय र प्राविधिक सहयोग मात्र प्रदान गर्दै आएको छ।
चेल्सी एफए कपको फाइनलमा, उपाधिका लागि म्यान्चेस्टर युनाइटेडसँग भिड्ने
एजेन्सी । साउथ ह्याम्पटनलाई हराउँदै चेल्सी एफए कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । काठमाडौं, […]
नेप्लीज रिक्रियशन क्लबमा अध्यक्षमा विष्णु हमाल निर्वाचित
अस्ट्रेलिया, नेप्लीज रिक्रियशन क्लब एनआरसीले अध्यक्षमा विष्णु हमाल चयन गर्दै साधारणसभा सिड्नीमा सकेको छ । […]
यसरी मनाइन्छ माघी पर्व
माघ १ । काठमाडौँ, थारु समुदायका मानिसले माघ १ गतेलाई नयाँ वर्षका रुपमा धुमधामका साथ स्नान, दान, एवम् […]
सात वटै प्रदेशमा सचिवको नाम समेत टुंगो, कहाँ को ? (नामावली सहित)
काठमाडौं । मुख्यमन्त्रीको कार्यालय व्यवस्थापनका लागि सरकारले सात वटै प्रदेशमा सचिव खटाउने भएको छ। यसका लागि […]
प्रचण्ड परिवार किन लाजिम्पाट छाडेर खुमलमटार सर्‍यो ? यस्तो छ कारण
काठमाडौं । पार्टी एकता र चुनावी तालमेलका लागि एमाले–माओवादी केन्द्रले प्रयोग गर्दै आएको घरघनीकै अर्काे घरमा […]
दक्षिण सुडानमा खटिएका नेपाली शान्ति सेनामाथि बालिका बलात्कारको आरोप
दक्षिण सुडान । दक्षिण सुडानमा खटिएका नेपाली शान्तिसेनाले बालिका बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ। सोमबार […]